Sein Lyan - စိ န် လျှံ: အင်္ဂါသားရဲ့ဝါသနာ အိပ်မက် ဆန္ဒနဲ့ ဘဝ
Writer Sein Lyan Time 11:25 pm
မရဲ့ ကာတွန်းလေး ကာတွန်းတွေအကြောင်းရေးတာကို ပြန်ဖတ်တယ်နော်?
ခု လောလောဆယ်တော့ စိန်ချက်တာ ကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ မူစာခါနဲ့ ပိုင်အဲလာရယ်.. စိန်ချက်ဖြစ်နေတဲ့ ခရမ်းချဉ်သီးငါးပိချက်နဲ့ ဝက်သားနဲ့ခရမ်းသီးနှပ်ရယ် ... အရမ်းစားချင်နေတယ်.... ပို့ပေး
စိန် ဖြစ်ချင်တာတွေ အမြန်ဆုံး အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ပါစေ..
ထောက်ခံပါတယ်။ စားသောက်ဆိုင်ဖွင့်ပါ။ :) အလကားများ လာစားရမလားလို့ ။
ဖြစ်ချင်တဲ့ ဆန္ဒတွေ ဖြစ်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးပါတယ်။
စားဖူးရင် မြင်ဖူးရင်တော့ ယုံမယ်...
ဆန္ဒ နဲ့ ဘဝ တထပ်တည်းကျ ပြီး
ဝါသနာ ၊ အိပ်မက်တွေ ကို အမြန်ဆုံး
အကောင်အထည်ဖေါ်နိုင်ပါစေ သတည်း ။
စားဖိုမှူးကြီး အဖြစ် မြန်မာပြည် ပြန်ုပြီး
ဆိုင်ဖွင့် ပါလား ။
ဟိဟိ ။ ရှယ်ယာ ထဲ့ မယ်လေ ။
မဆုတ်မနစ်သော ဇွဲလုံ့လတို့ဖြင့် ကြိုးစားဖို့တော့လို တာပေါ့ဗျာ...။
ဆန္ဒ နဲ့ ဘ၀ ထပ်တူ ကျနိုင်ပါစေ..။
ဆန္ဒနဲ့ဘ၀ ထပ်တူကျပါစေ ကိုဖိုးချိန်ရေ
ကိုယ် Multimedia ကို လေ့လာတုန်းက ညီ့လို အိပ်မက် မက်ခဲ့ဖူးတယ်။ ကိုယ်တို့ရဲ့ မြန်မာ ကာတွန်းဇာတ်ကောင်တွေကို နိုင်ငံတကာ အဆင့်မှီ ကာတွန်းရုပ်ရှင် ဇာတ်ကောင်တွေ အဖြစ် အသက်သွင်းဖို့ပေါ့။ ညီ Studio ထောင်ရင်တော့ ကိုယ့်ကို လက်တို့လိုက်ပါ။ ကိုယ် ရှယ်ယာပါမယ်။
ထမင်းဆိုင် ဖွင့်တာလဲအားပေးတယ်။ ဒါမှ တစ်သက်လုံး ညီ့ဆိုင်မှာ အခမဲ့ အားပေးလို့ ရမှာ။
ပါရမီရှင်လေးတွေကို မြေတောင် မြှောက်ပေးချင်တဲ့ စိတ်စေတနာလေးတွေ တွေ့ရတာကိုလဲ ကျေနပ်တယ်။ လေးစားတယ်။
ချစ်ညီ ရဲ့ ဆန္ဒ နဲ့ ဘ၀ တစ်ထပ်ထည်း ကျနိုင်ပါစေ။
မကြီးဝါက နံပါတ်မှာ ၁၃.း))
ဖိုးစိန်စားသောက်ဆိုင်ပိုင်ရှင်ကြီးဖြစ်တော့ ကိုယ့်အမတွေ အလကားစားရတာပေါ့ကွယ်. အဟတ်
စတာပါ.. လာအားပေးမှာပေါ့.. အလကားကျွေးတန်ကျွေး.ဒစ်စကောင့်လျှော့တ်လျှော့
ကာတွန်းကားကတော့ ဖိုးစိန်ကိုယ်တိုင် စိန်မျောက်မျောက်နေရာက ၀င်သရုပ်ဆောင်နိုင်တာပဲ.
တော်ကြာနေဆိုရင် သာဓုခေါ်တော့နော်. နောက်ထပ် ၁၅ မိနစ်း)
ကဲဗျာ.. မချက်တတ်မပြုတ်တတ် စိတ်ညစ်နေတဲ့ နှမငယ်တို့ရေ.. အားမငယ်ကြလေနဲ့ မောင်ဖိုးစိန်ကိုသာ အားကိုးကြပေတော့..း)
အကိုရေ ၀ါသနာတွေ အိပ်မက်တွေ ဖတ်သွားပါတယ် တချိန်ချိန်မှာတော့ ကိုယ်ဖြစ်ချင်တာတွေ ဖြစ်လာရမှာပေါ့ အားမငယ်နဲ့ စိတ်ဓါတ်မကျနဲ့ အကိုရေ အမြဲ ဘေးမှာ အားပေးမဲ့ ယောကျာ်းသားကျနော် ရှိတယ်း))
မောင်လေး ဆန္ဒတွေ အမြန်ဆုံးပြည့်ဝပါစေ။
ကြွက်ကလေး ကာတွန်း လိုမျိုး လုပ်ပါလား. ချက်လဲ ချက်ပြီးသား ကာတွန်းလဲ ဆွဲပြီးသားး))
ဆန္ဒနဲ့ဘ၀ တစ်ထပ်တည်းကျပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးပါတယ်။
ကိုကြီးမနေ့ ကလေဖတ်ပြီးထပ်မန့် ဖို့ မေ့သွားတယ်
အတော်ပဲ ကိုဂျီးကို ဟင်းချက်သင်ခိုင်းရမယ်။
ကျနော်က ဟင်းလုံးဝ မချက်တတ်လို့။
အမမှာတော့ ဒီမှာတနေ့တနေ့မရိုးနိုင်သော ဟင်းပွဲ
အများဆုံးချက်တတ်မှ 10 မျိုးထက်မပိုသော ဟင်းရံ
ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်ချက်ပြီး ကြည့်ကိုမကြည့်ချင်သော (စားချင်ဘို့ဝေးစွ)ဟင်းပွဲ
ကိုစိန်စိန် ဆန္ဒတွေ အမြန်ဆုံးပြည့်ပါစေလို ဆုတောင်းပေးနေမယ်နော်........
ကိုဖိုးစိန်ရဲ့ စတူဒီယိုကို လာလည်တဲ့ သူငယ်ချင်းတွေကို
ကိုဖိုးစိန်ပိုင်တဲ့ ဟိုတယ်မှာ ကိုယ်တိုင်ချက်ထားတဲ့ လက်ရာနဲ့ ဧည့်ခံတဲ့နေ့ရောက်လာမှာပါ...မဖြစ်နိင်ဘူးလို့
I wanna encourage you to do your best...
And don't forget that your parents don't want anything except love from you...
For them, you are adorable enough ...
Please get this image from the link below and try to boost up your aim ....
"မျောက်မ" ကရှာတာ မတွေ့သေးဘူး...
ဆန္ဒနှင့် ဘဝ ထပ်တူကျတဲ့ တစ်နေ့့အမြန်ရောက်ပါစေဗျာ.. ဝါသနာကောင်းလေးတွေ ဖြစ်လာမှာပါ
I ကတော.ရေမြင်းလေးနဲ.နှင်းနှင်းလေးပဲကြိူက်တာ ဟားဟား...ကဖိုးစိန် လက်မှာအဆိပ်ရှိတယ်ဆိုမှစားသောက်ဆိုင်ဖွင်.ရင်
လာစားသူတွေသေကုန်မှာပေါ. Pagoda Pagoda !!
10 July 2009 at 05:43
သြော် အင်္ဂါသားကိုး... ဒါနဲ့ ဆရာသမားရဲ့ မွေးနေ့က ရှေ့အင်္ဂါလား နောက်အင်္ဂါလား ခင်ဗျ။
ကိုကြီး စိတ်ကူးလေးတွေက တော်တော်လှတယ်ဗျာ။
စိတ်ကူးလေးတွေ လက်တွေ့အကောင်အထည် ဖော်နိုင်ပါစေနော် ။
ဟင်းချက် ကောင်းတဲ့ကိုကြီးဆီ ဟင်းချက်နည်း
ဆန္ဒတွေအကောင်အထည်ပေါ်ပါစေ ကိုဖိုးစိန်ရေး)
ဒီကိုလာရင်တော့ ချက်ကျွေးတော့မယ်ထင်တယ် :P
ညီမက ချက်ဖို့သာပျင်းတာ စားဖို့ဆို တရေးနိုးထကျွေးလည်း စားပါတယ်
11 Jul 09, 13:04
kom: အခု ကိုယ်လာပြီ.
kom: ချစ်သူတွေအများကြီ့း ကွန်မက်တွေအများကြိးမို့လို့ အများထဲက တစ်ယောက်မို့လို့အားငယ်လို့မရေးခဲ့တော့တာပါ။
kom: အဲဒါ ဂျုလိုဒရင်းရေးခဲ့ဘူးတဲ့ ကျွန်တော်ကြိုက်သောကာတွန်းကားများ နဲ့လေး အကြုံးဝင်သေးတယ။် သူလဲကာတွန်းကား ကြိုက်တယ် ရွမ်းမီလည်းကြိုက်တယ။် အစ်မကတော့စားရတာပိုကြိုက်တယ်။ မော်လမြိုင်သူများအစားဆိုတော့မွန်တွေ က
kom: ဖြစ်ခဲ့သမျှတွေအတွက်တောင်းပန်ဝန်ချဘို့ကိုယ်ရောက်ခဲ့ပြီ။ ခွင့်လွတ်ပါလေ။
ကာတွန်းကတော့ ကြိုက်တယ်။ စားစရာလဲ ကြိုက်ပါတယ်။ ချက်ရတာသာ မကြိုက်တာ။
ဟင်းချက်ကောင်းတယ်ဆိုရင်တော့ .. အဆင်ပြေ တယ်။။။ ဆိုင်မဖွင့်နိုင်သေးရင်တောင် ကိုယ့်အတွက် ကိုယ် ကောင်းကောင်းစားနိုင်တာပေ့ါ..။